トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Soul naye uye
Ndinofunga zvakanzi sokuti "munhu uyu kuuya zvakanaka Kuva," "asingabatsiri uye ichi hachisi munhu"?
sezvo vakadaro, vanhu kuvapo Yorisoeru sei naka ungasazviziva mweya naye. A mweya naye, ndizvo iripo mune zvakasiyana ukama hwakadai vanoda uye neshamwari.
Tinozvarwa tiri kufa, isu akadzokorora kakawanda kutenderera kuti zvakare patsva. In kuti kutenderera, kunonziwo kwakadzama munhu ane unopinza nazvo anosangana mweya naye nguva zhinji. Muna kutenderera uneshongedzo kusangana sezvingatarisirwa mu nguva vanofanira kusangana, isu nguva mumwe vakavakira hwepedyo. Mweya naye, izvo zvakabatanidzwa nomweya mhiri
unhu hwakafanana, unofanira kunzwa nguva dzose chinhu chakasiyana nevamwe vanhu. In
ari chepfungwa mweya naye
, chii izvozvo? A chepfungwa mweya naye.
dzakawanda kare upenyu kugara pasi uye kuva pamwe chete rinowana musangano, nokuti vanhu vakanga vakapedza imwe nguva, kunyange kana uri kufambidzana nomumwe akasangana zvino, unogona kupedza imwe chikonzero akadzikama. Nekuti hwakabatana pedyo chivimbo chaizvo mune mumwe, ndinoyeuka pfungwa pfungwa iri gadzikana.
? Kunyange asati sezvo raiva
mweya naye uye musangano wokutanga kuti ndinonzwa kuti pane kuti imwe nzvimbo, unorangarira nostalgic sokuti takasangana kumwe. Uye, zvinoratidzika kuva vaingobvuma kuzivana. Izvi, inoti kuti uchapupu mumwe panguva mweya pamwero ndiye mumwe kukwezvwa.
? ari Mubereko kurasikirwa Ndiende kufambidzana Tsukiaeru
vanhu uye opener, ndizvo zviri havanyanyi kuti ingashanda pasina nokufunga kurasikirwa uye kupfuma. Asi nokuda mweya naye, kunyange pasina kusanganisira chero kukarukureta, akadai Mubereko kurasikirwa, zvinonzi akaberekwa kunzwa kuti unoda kuita chinhu nokuda mumwe bato.
? mumwe neimwe nzira kuonekwa
Kazhinji, uye vanofanira naye mashoko zvauri kufunga vamwe bato Chinowanzoonekwa haana kumutsamwira kuti, zvinotora yakawanda nguva ave kunogona kuonekwa chiso chavo uye mafungiro. Zvisinei, kunyange pasina mashoko uye mamwe mashoko ane mweya naye, unogona achitonga neimwe nzira manzwiro.
nekuti, zvakajairika zvikamu kazhinji
ichi zvakafanana zvikamu havasi chete chikamu unhu uye unhu hwakadaro. Somuenzaniso, guta rokumusha uye kufarira nzvimbo, kusvikira chinhu uye mhuri yakarongeka vane, mumwe zviri kwomweya naye kuti pane zvakawanda zvakafanana nhengo.
ndiko kusangana mweya naye?
ndiyo mumwe vanokwezvwa hunhu uye mweya wako, asi pane pane kuitwa kusangana iri. Nokuti kana ukasangana mweya naye, imi munoti kuti kazhinji rose rinokosha uye pakachinja hwangu. Kana ari kuedza Susumo padanho rinotevera, akadai nedanho kukura, chinhu kuti chokwadi kusangana kana kuedza Fumo upenyu.
Naizvozvo, kuti vasangane mweya naye, kutanga kufambira mberi hwake zvakanaka, uye kusangana nevanhu Ngatimbozviedzai kuti nguva imwe neimwe kukoshesa.
, Chinhu chinhu kuti chokwadi kusangana kana kuedza Fumo upenyu.